शनिबार, ०२ असोज २०७८, ०६ : ३३
एकोहोरो माया कहिले सम्म ?
न त हाम्रो प्रेम नै हो न त ब्रेक अप नै। म सबैसँग मनमा लागेको कुरा फ्याङफुङ बोल्ने मान्छे ऊसँग पनि बोलेँ ऊ पनि उस्तै थियो।
२ वर्ष चिकित्सकका रुपमा सेवा गरिसकेका उनमा जवान ठिटोभन्दा कुनै कमी छैन, ऊर्जा। सधैँ टिपटप देखिने डा. रेग्मी वीर अस्पतालस्थित मुटुरोग विभागका पूर्व विभागीय प्रमुखसमेत हुन्।
सुन्दर फूलको बैगुनी एलर्जी
चिकित्सकका अनुसार फूलको परागकणको एलर्जीका कारण आँखा रातो भएर दुख्ने, बिझाउने, पोल्ने, चिप्रा लाग्ने, चिलाउनेजस्ता लक्षण देखिन्छन्। समस्या बढ्दै गए भाइरसको संक्रमण भई आँखा रातो भएर पाक्न सक्छ, जसलाई इन्फेक्टिभ भनिन्छ।
मेरो बर्बादीको कहानी !
सम्बन्ध राम्रै चलिराको थियो तर अचानक एकदिन उनले ‘अबदेखि म तिमीसँग रिलेसनमा बस्दिनँ, तिम्लाई छोड्नु मेरो बाध्यता हो, यस्तै यस्तै’ भनेर म्यासेज पठाइन्।
हाेलीमा रङकाे जाेखिम
रङको कारण एलर्जी हुँदा छाला चिलाउने, पोल्नेजस्ता समस्या हुनुका साथै छाला फुस्रो तथा रातो हुने, चहर्याउने, छालामा मसिना बिमिरा आउने, डाबर देखिने, घाउ हुने जोखिम हुनसक्नेतर्फ छालारोग विशेषज्ञ सजग गराउँछन्।
लोग्ने छोडौँ माया लाग्छ, नछोडौँ...
तपाईंहरुको मूल्यवान् समय खेर नफालूँ भनेर मेरो समस्यालाई छोटकरीमा लेख्ने प्रयास गरेकी छु। मेरो बिहे भएको एक वर्ष भयो तर सोचेकोजस्तो कहिल्यै पनि भएन। सधैँ घरझगडा भइरह्यो, हामी श्रीमान्–श्रीमतीबीच।
टिपटप ज्यान: श्वेताको फिटनेस टेक्निक
श्वेता बिहान उठ्दा साढे छ बजिसकेको हुन्छ। उठ्नासाथ एक गिलास मनतातो पानी पिउन छुटाउँदिनन्। त्यसपछि एक कप मीठो चिया पिउँछिन्। कुनै दिन ब्ल्याक टी पिउँछिन् भने कुनै दिन मिल्क टी। उनलाई चिनी हालेको मीठो चिया पिउनु पर्छ।
संक्रमित मासुले ज्यान जोखिममा
राम्रोसँग नपाकेको मासुलगायतका खाद्यपदार्थ खानाने व्यक्तिमा ‘सालमोनेला’ ब्याक्टेरिया सरी संक्रमणको जोखिम हुन्छ। संक्रमित मासु खाँदा यस्तो जोखिम हुन्छ। ज्वरो आउने, रगत मिसिएको पखाला लाग्ने, पेट दुख्ने, बान्ता हुनेजस्ता यसका लक्षण देखिन्छन्।
पहिला म एक्लै थिएँ दिन राम्रोसँग बितेका थिए तर फेसबुकमा एउता केटाको रिक्वेस्ट आयो २ महिनामा एसेप्ट गरेँ। साथी भएपछि कुराकानी भेटघाट हुन थाल्यो। उसले गौशालामा मलाई भेट्न बोलायो अनि म भेट्न गएँ।
डिआइजीको फिटनेस सूत्र: दैनिक दुई घण्टा व्यायाम गर्ने डिआइजी
हाल महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानिपोखरीको प्रमुखका रुपमा सेवारत पोखरेलले करिब आधा दर्जन प्रहरी कार्याल प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।
अनुहार चम्काउन इन्जेक्सन
छाला सुख्खा हुनबाट बचाउन र छालामा चमकता ल्याउनका लागि आजकाल ‘इन्जेक्टिङ मोश्चर’ विधिको प्रयोग बढ्न थालेको छ।
वास्तविक प्रेममा विच्छेद हुने सम्भावना अत्यन्तै कम हुन्छ। यौन जोडीबीचको सम्बन्ध वास्तविक तथा साँचो मायाको गहिराइमा नपुगेको अवस्थामा ट्रयाजेडी पर्न सक्छ। छोटो समयमै झांगिएको यौन जोडी बीचको प्रेम वास्तविक रुपमा सच्चा प्रेमको रुपमा विकास नहुनाले सम्बन्ध विच्छेदको जोखिम हुने चिकित्सकहरुको भनाइ छ।
‘देखेर हुँदैन, लेखेको भएरै छाड्छ’
हप्ता दिनदेखि सबैलाई ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ लाग्या छ। सोसल मिडियामा जताततै ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’सम्बन्धी लेखेको देख्दा हामीजस्तो मायामा धोका खाएर बसेका मान्छेलाई रिस उठेर आउने भन्या !